Elite Express - content-slider
-Select-Bagan (ပုဂံ)Dawei (ထားဝယ်)Gangaw (ဂန့်ဂေါ)Hopone (ဟိုပုန်း)Kale (ကလေး)Magwe (မကွေး)Mandalay (မန္တလေး)Mawlamying (မော်လမြိုင်)Minbu (မင်းဘူး)Monywa (မုံရွာ)MRTV(TK) မြန်မာ့အသံ(တပ်ကုန်း)Mudon (မုဒုံ)Myawady(မြဝတီ)Myeik(မြိတ်)Naung Cho (နောင်ချို)Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ)Naypyitaw(Myoma) (နေပြည်တော်_မြို့မ)Nyaung Shwe (ညောင်ရွှေ)Pakhuokku (ပခုက္ကူ)Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)TatKone (တပ်ကုန်း)Taunggyi(Hopone) (တောင်ကြီး(ဟိုပုန်း))ThanPhyuZayat (သံဖြူဇရပ်)Yangon (ရန်ကုန်)
Yangon ->Naypyitaw Yangon ->Mandalay Yangon ->Taunggyi Yangon ->Monywa Yangon ->BaganYangon ->Mawlamying Yangon ->PyinOoLwin – Naung Cho…	Read More
နေပူပူ ၊ မိုးရွာရွာ ပို့စရာပစ္စည်းတွေ နောက်ကျမှာ စိတ်မပူပါနဲ့ …Elite Express မှ လူကြီးမင်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို မြို့ကြီးများသို့ လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ ....	Read More
Elite Express ၏ ခရီးစဉ်များကို http://www.eliteexpressmyanmar.com မှတစ်ဆင့်Online Payment စနစ်နှင့် လက်မှတ် ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ …	Read More
🇲🇲Southern Myanmar - တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ခရီးစဉ်များကိုလည်း🚍 Elite Express နှင့် အတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စိတ်အေးချမ်းသာစွာ သွားလာနိုင်တော့မည်ဖြစ်ပါကြောင်း……….. 👩ရွှေဝယ်သူ👳 ရွှေဝယ်သားများ👩 မြိတ်သူ👳 မြိတ်သားများ၏…	Read More
Elite နှင့် ခရီးသွားခြင်း
ရန်ကုန် - နေပြည်တော် - တပ်ကုန်း
နေပြည်တော်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး တတိယအကြီးဆုံးမြို့တော်ဖြစ်ပါသည်။ နေပြည်တော်တွင် (၂၄) နှင့် (၂၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး ၊ တတိယအကြိမ်မြောက် BIMSTEC ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ၊ နဝမအကြိမ်မြောက် အရှေ့အာရှထိပ်သိမ်းအစည်းအဝေး နှင့် (၂၀၁၃) ခုနှစ် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲတို့ကို ကျင်းပခဲ့သည်။ နေပြည်တော်တွင် မြန်မာ့လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ…
မန္တလေးသည် ဧရာဝတီမြစ်၏ အရှေ့ဘက်တွင်ရှိပြီး ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တော်ဖြစ်သည်။ အထက်မြန်မာပြည်၏ စီးပွားရေး အချက်အချကျသောမြို့တော်ဖြစ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် နှင့် ဘုရားစေတီများတည်ရှိရာ မြို့တော်လည်းဖြစ်သည်။ မန္တလေးနန်းတော်အတွင်းတွင် နန်းမြင့်ဆောင် နှင့် မန္တလေးယဉ်ကျေးမှုတို့ရှိရာ ပြတိုက်တို့တည်ရှိသည်။ လမ်း ၃၀ ဂိတ် : 09 977…
တောင်ကြီးသည် ရှမ်းပြည်နယ်၏ အကြီးဆုံးမြို့တော်ဖြစ်သည်။ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့တွင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ မီးပုံးပျံပွဲသည် တောင်ကြီးမြို့၏ အထင်ရှားဆုံးပွဲတော်ဖြစ်သည်။ ကလောဂိတ် : 09 977 838 315 ဟိုပုန်းဂိတ် : 09 977 838 314 သစ်တောဂိတ် : 09…
ရန်ကုန် - မုံရွာ - ဂန့်ဂေါ - ကလေး
မုံရွာ မုံရွာသည် မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက် (၁၃၆) ကီလိုမီတာ အကွာတွင်ရှိသည်။ မုံရွာမြို့တွင် အဓိက အထင်ကရနေရာမှာ သမ္ဗုဒ္ဓုစေတီတော်ဖြစ်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိဘူဘူဒူနှင့် ဆင်တူသည့်ကြီးမားသည့် ရုပ်ပွားတော်များရှိသောဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းဖြစ်သည်။ ဂန့်ဂေါ ဂန့်ဂေါသည် မြန်မာနိုင်ငံ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်ရှိ…
ရန်ကုန် - ပုဂံ - ပခုက္ကူ
ပုဂံသည် UNESCO အသိအမှတ်ပြု ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နှင့် ရှေးဟောင်းလက်ရာ စေပုထိုးများရှိရာမြို့တော်ဖြစ်ပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် တည်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၁၁ ရာစု မှ ၁၃ ရာစု ပုဂံခေတ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းများ၊ ဘုရားစေတီပုထိုးများနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပေါင်း ၄,၄၄၆ ခုကိုဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင်အောင်ကျန်ရှိနေသေးသော ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် စေတီပုထိုးများ ၃၈၂၂ ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။…
ရန်ကုန် - မော်လမြိုင် - သံဖြူဇရပ်
မော်လမြိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စတုတ္ထမြောက် အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ မွန်ပြည်နယ်၏မြို့တော်နှင့် အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ဘက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဗဟိုနှင့် ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းဖြစ်သည်။ မော်လမြိုင်ဂိတ် : 09 977 838 156, 09 977 838 157သံဖြူဇရပ်ဂိတ် : 09…
ရန်ကုန်- ပြင်ဦးလွင် -နောင်ချို
ပြင်ဦးလွင်သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ သာယာလှပသော တောင်ပေါ်မြို့ဖြစ်သည်။ ဆွယ်တာချည်ထိုးခြင်း၊ ပန်းနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဥယျာဉ်များ၊ စတော်ဘယ်ရီနှင့် နာနတ်သီးဥယျာဉ်များ၊ ကော်ဖီစိုက်ခင်းများနှင့် နွားမွေးမြူခြင်းတို့သည် အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ ပြင်ဦးလွင်ဂိတ် : 09 977 838 180, 09 977 838…
ရန်ကုန် - မကွေး - မင်းဘူး
မင်းဘူးသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် တည်ရှိသည်။ မင်းဘူးရွှေစက်တော်ဘုရားသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြည်ညိုဆုံးသော ဘုရားများအနက် တစ်ဆူဖြစ်သည်။ မင်းဘူးတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ သယ်ယူပို့ဆောင် ဂဏန်း ၊ ငါးခြောက် နှင့် ပုစွန်ခြောက်များ ပေါများသည်။ မကွေးဂိတ် : 09 977 838…
မြိတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ တနသာ်ရီတိုင်းဒေသကြီးတွင်တည်ရှိပြီး မြို့၏တောင်ဘက်စွန်းတွင် အက်ဒမန်ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ မြိတ်သည် တနသာ်ရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ မြိတ်တွင် မြန်မာဘုရားပုထိုးများ တည်ရှိရာနေရာဖြစ်ပြီး အကြီးဆုံးမှာ သိမ်ကြီးဘုရား ဖြစ်သည်။ မြို့တွင်း : 09 977 830 053မြိတ်ကားကွင်း…
Elite Express အဆင့်မြင့်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ရာ ယခုဆိုလျှင် (၉) နှစ်တိုင်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
မြို့ကြီးများသို့ ခရီးစဉ်များတိုးချဲ့ပြေးဆွဲခြင်း ၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ Scania ၊ SC Neustar အမျိုးအစား ခရီးသွားယာဉ်အသစ်များ ဝယ်ယူတိုးမြင့်ခြင်း ၊ ခရီးသည်များကိုနွေးထွေးပျူငှာစွာဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုအပြည့်အဝဖြစ်သော ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းများပို့ချပေးခြင်း ၊ ခရီးသွားပြည်သူများ လျင်မြန်လွယ်ကူစွာဖြင့် ခရီးစဉ်လက်မှတ်များအား elite express ဂိတ် များ၊ အေးဂျင့်ဂိတ်များနှင့် online စနစ်တို့မှ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ရန်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ တိုးမြှင့်ပေးခြင်းများဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးစားခဲ့ရာ မြို့ပေါင်း (၂၅) မြို့ နှင့် ယာဉ်စီးရေပေါင်း Scania (၁၀၈) စီး ၊ SC Neustar (၆) စီးတို့ဖြင့်ပြေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပြီး နေ့စဉ် ခရီးသည်ပေါင်း (၂၀၀၀) ခန့် တို့ကို စီးပွားရေး လူမှုရေး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲများအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိင်သော အဆင့်မြင့်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကြီးအဖြစ် ယနေ့ထိတိုင်ဂုဏ်ယူစွာရပ်တည်နေနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးပါသော ခရီးသွားဧည့်သည်တော်လူကြီးမင်းများ နှင့် အကောင်းမွန်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ဝန်ထမ်းများကို အမြဲကျေးဇူးတင်လျက် ~~~~
Elite Express အဆင့်မြင့်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း
Rainy Season Promotion (မိုးရာသီ Promotion)
Rainy Season Promotion (မိုးရာသီ Promotion) ခရီးသွားမိဘပြည်သူများအား ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် Elite Express မှ ပြေးဆွဲနေသော ခရီးစဉ်အားလုံးအား မိုးရာသီအထူးလျှော့ဈေးအနေဖြင့် (၀၁.၀၆.၂၀၁၉) မှ (၃၀.၀၉.၂၀၁၉) အထိ (၄)လတိုင်တိုင် မည်သည့်ခရီးစဉ်မဆို လက်မှတ်တစ်စောင်ဝယ်လျှင် Special Discount 10% ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်Customerများအား သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ
• Elite Express Promotion Page လေးကိုလည်း Like & Share လုပ်ပြီး လူကြီးမင်းတို့၏ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများအား ပြန်လည်မျှဝေပေးကြပါစို့……….
• Promotion ခရီးစဉ်လက်မှတ်များအား နီးစပ်ရာ ရန်ကုန်/နယ် Eliteဂိတ်များနှင့် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များထံတွင်သာမက Elite Website Page ဖြစ်သော www.eliteexpressmyanmar.com တွင်လည်းဝင်ရောက်လေ့လာပြီး သွားမည့်ခရီးစဉ်အတွက်မဆို MPU payment ဖြင့်လည်း တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Promotion အတွက် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကလည်း Hot Line: 09977838001/002/ 003 /150 နှင့် CONTACT US အောက်မှ Elite Stations ကိုနှိပ်၍လည်း Elite Express ရန်ကုန်/နယ်ဂိတ်များ၏ ဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ
Copyright © 2020. All Rights Reserved. Elite Express Public Company Limited